चलचित्रकर्मी ज्यु, यो समय सहानुभूतिको हो, प्रचारको होइन::Ranga post
चलचित्रकर्मी ज्यु, यो समय सहानुभूतिको हो, प्रचारको होइन
रामजी ज्ञवाली –
काठमाण्डौं २२, वैसाख । यतिवेला कुनै कलाकारहरुको फेसवुक टाईमलाईन हेरियो भने देख्न सकिन्छ, ‘भुकम्प पिडीतका लागी राहत प्रदान गर्दै, हामीले त राहत प्रदान गरियो, तपाई पनि आफ्नो ठाउँवाट सहयोग गर्नुस् है वा यस्तै यस्तै ।’ तर त्यहाँ सायदै कलाकारहरुले पोष्ट गरेका छन् कि, –‘भुकम्प पिडीतका लागी मैले यति रकम दिए, यति राहत प्रदान गरे ।’ अर्को कुरा, राहत प्रदान गर्ने नाममा मिडीयामैत्री नभएका कलाकारहरु कोही छैन भन्दा हुन्छ । अनलाईन पत्रिका, रेडियो र आफ्नो फेसवुक वाल वा अरु कुनै समाजिक सन्जालको माध्यम किन नहोस् । राहत प्रदान गर्दै गर्दा मिडीयाले एक्कासी भेट्टाएको खवर सुन्न पाईएको छैन ।
नेपालमा एउटा चलचित्रबाट ५ लाखसम्म लिने कलाकार पनि छन् । एउटै चलचित्र निर्देशन गरेको महंगो पारिश्रमिक लिने चलचित्रकर्मी पनि छन् । एउटै चलचित्रबाट करोड कमाएको ठुला ठुला कुरा गर्ने निर्माता पनि छन् ।
तर, कुनै पनि चलचित्रकर्मीले आजका दिनसम्म एक रुपैया“ आफ्नो गोजीबाट निकालेको पाईएको छैन । अरुले दिएको राहतलाई वितरण मात्र गर्ने कि अब आफूले पनि सहयोगका लागि मन कमलो बनाउने ? हामी सामान्य रकम सहयोग गर्न नसक्ने कोही पनि छैनौं ?
चलचित्रकर्मी, पत्रकारका घर ध्वस्त भएका छन् । उनीहरुको पनि बस्ने बास, खाने गास काटिएको छ । ‘अब, यो रकम पनि अरुस“ग हात फैलाएर माग्नुभन्दा आफूबाट पनि केही निकाल्दा कसो होला । अर्को कुरा नेपालका चलचित्रकर्मीको एउटा क्रियाकलापले पनि रंगिनवजारलाई तताएको छ । एक रुपैयाको राहत, एक सयको विज्ञापन र एक लाखको प्रचार भनेझै भएको छ ।
अहिलेकी चल्तीकी नायीका प्रियंका कार्कीले आफ्नो वाल भुकम्प सम्वन्धी न्युज र राहत सम्वन्धी विषयले भरेकी छिन् । तर म आफै यति रकम दिए चाहि भन्न भ्याएकी छैनन् । नेपालका चलचित्रका फ्यानहरु कोही भुकम्पका पिडीत छन् भने उनिहरुले पनि यो सोचेका होलान ।
अर्को उदाहरण, रेखा थापा भईन्, उनले पनि वढि भुकम्प सम्वन्धी प्रचारात्मक समाग्रीले आफुलाई थप प्रचार गर्न खोज्दैछिन् । यद्यपी उनले राहत रकम उठाएर भन्दा पनि राहत वाढेको भनेर प्रचार गरिरहेकी छिन् । काम भन्दा पनि नाम वढि ल्याउन खोज्ने नायीका थापा पनि वढि सस्तो लोकप्रियता खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
नायीका रेखा थापा, प्रियंका कार्की, हिमग्याप मात्रै हैनन नायीका नम्रता श्रेष्ठ, चलचित्र निर्देशक हिमग्याप लामा, नायक राजवल्लभ कोईराला, करिश्मा मानन्धर, भुवन केसी, रमेश उप्रेती, दिलीप रायमाझी, केकी अधिकारी, मेलिना मानन्धर, झरना थापा, जितु नेपाल, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, जितु नेपाल, किरण केसी, केशव भट्टराई, गायक राजेश पायल राई लगायत सवै जसो कलाकारहरुलाई वढि सस्तो लोकप्रितयता खोजेको जस्तो देखिएपनि यहाँ कोही भन्दा कोही कम देखिएका छैनन । अझ यहाँनिर यो पनि भन्न सक्छौंकि, कस्ले भन्दा कस्ले राम्रो काम गरेझै गरेको तस्विर फेसवुक वालमा राख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धानै चलेको छ । गायक राजेश पायल राईले त यो पनि भन्न भ्याएकी, –‘ज्युदै भेटिएको वच्चालाई मैले पाल्छु ।’ यदि पाल्ने चाहाना हो भने बच्चालाई ल्याएर पाले भैहाल्योनी, किन मिडीयामा भन्नुप¥र्यो ।
उनिहरु मात्रै हैन सवै कलाकारहरुको क्रियाकलाप वढि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारवाजी देखिएका छन् । अझ भनौं, आजसम्म हेर्ने हो भने विश्वमा बस्ने सायदै नेपाली कलाकारले आफ्नै गोजीबाट १ डलर निकालेका छैनन् । अरुले गरेको सहयोगलाई यति गरे र उती गरे भनेर प्रचारवाजी मात्र गरिरहेका छन् । चाउचाउ बा“डेका र चिउरा दिएका तस्विर फेसबुकमा पोष्ट गरेर ‘लोकप्रियताको शव्द खोजीरहेका छन् ।
त्यसो त केही चलचित्रकर्मी दिन रात नभनी राहत वितरण सहयोगमा जुटेका पनि छन् । ती चलचित्रकर्मीको कामलाई तारिफ गर्नैपर्छ । अमेरीकामा लामो समयसम्म वसेर अहिले नेपाल झुल्कीएका सरोज खनालले अण्डा र १० लाख वाढ्ने कुरा त आयो तर वाढिसकेको भन्ने समाचार चाहि आएन । उता अमेरीकामा उपचारका लागी पुगेकी नायीका स्वेता खड्काले अमेरीकाका विभीन्न स्टेटमा कोहीनुर प्रर्दशनले कमाएको सम्पुर्ण रकम दिने घोषणा गरिसकेकी छिन् त्यो पिडीतहरुले कहिले पाउनेहुन त्यो हेर्न वाकीनै छ । यस्तै महानायक राजेश हमालले एक करोड रुपैया राहतका लागी उठाएको समाचारले पनि अहिले वजार पिटीरहेको छ ।
तर, केहीलाई भने सेल्फी खिचेर फेसबुकमा हाल्ने मोहले छोएको छ । अहिले चलचित्र Ôेत्रमा यो विÈयमा निकै आलोचना भएको छ । यस्तै, राहत वितरणका लागि चलचित्रको नाम जोडेर मिडियामा प्रचार गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । यो समय सहानुभूतिको हो, प्रचारको होइन । तपाईले वितरण गरेको राहत कसैका लागि ठूलो सहयोग हुनसक्छ, तर, त्यसमा चलचित्रको नाम र प्रचारको आशा गर्नु के सही होला ?